डा. गोविन्द केसीमाथिको अपहेलना मुद्दाको सुनुवाई प्रारम्भ - Koshi Online
डा. गोविन्द केसीमाथिको अपहेलना मुद्दाको सुनुवाई प्रारम्भ
काठमाडौं, पुस २६
अदालतको अपहेलना गरेको अभियोगमा हिरासतमा रहेका अनसनरत डा. गोविन्द केसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई बुधबारबाट सुरु भएको छ । केसी विरूद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गर्ने छ ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले वीर अस्पतालबाट अदालतमा उपस्थित गराइएका डा. केसीसँग बयान लिने काम हिजो सम्पन्न गरेपछि सुनुवाईको बाटो खुलेको हो । केसीलाई अदालतको आदेशमा सोमबार साँझ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको न्याय सम्पादन पूर्वाग्रही रहेकाले उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने केसीको माग छ । अनसनबारे अदालतमा बयान दिने क्रममा केसीले आफ्नो अनसन न्यायालयविरूद्ध नभई प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध लक्षित रहेको प्रष्ट पारेका छन् । मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा दुबैतर्फका कानून व्यवसायीले आ-आफ्नो पक्षको बचाउ गर्नेछन् ।
आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको बताउँदै डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पूर्वाग्रही न्याय सम्पादनका कारण अदालतको अपहेलना भएकोले पराजुलीउपर हदैसम्म्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा अपहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भए डा. केसीलाई एकवर्ष कैद वा बढीमा १० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ।
केन्द्रलाई झक्झक्याउन वडास्तरमै वाम एकता
सवारीलाई हतियार बनाउँदाको परिणाम
खानेपानी मन्त्रीद्वारा आकस्मिक निरीक्षण
पृथ्वी बचाउने सन्देशका साथ पृथ्वी दिवस मनाइंदै
सङ्कट समाधानको प्रतिबद्धता व्यक्त
९ बैशाख २०७५, आईतवार १९:०७
ट्रिपरलाई सडकमा कडाइ गर्दै ट्राफिक प्रहरी
९ बैशाख २०७५, आईतवार १८:४३
मुख्यमन्त्री राई बने तीन बालबालिकाका अभिभावक
९ बैशाख २०७५, आईतवार १७:५४
रात्रि उडान सुरु गर्ने तयारीमा भद्रपुर विमानस्थल
९ बैशाख २०७५, आईतवार १७:३९
निर्देशकले रौनियारले छाडिन् रेखाको चलचित्र
९ बैशाख २०७५, आईतवार १७:०९
चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ले ४ दिन सित्तैमा यात्रा गराउने
९ बैशाख २०७५, आईतवार १७:००
चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’को रथ यात्रा गरिने
९ बैशाख २०७५, आईतवार १६:५०
गर्भपतन सेवामा ग्रामिण महिलाको पहुँच बढ्दै
९ बैशाख २०७५, आईतवार १६:४७
९ बैशाख २०७५, आईतवार १६:४२
मस्को फेस्टिभलमा कृष्णको टोली प्रस्थान
९ बैशाख २०७५, आईतवार १६:२६